यस्तो रैछ कारण: थापाले प्रधानन्यायाधिश जबरालाई बिदामा जानुको सुझाव - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
यस्तो रैछ कारण: थापाले प्रधानन्यायाधिश जबरालाई बिदामा जानुको सुझाव
प्रतिनिधिसभा विघटनबारेका रिट निवेदन सुनुवाइका लागि गठन गरिएको इजलासको विषयमा प्रश्न उठेको छ । शेरबहादुर देउवासमेत १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपूर्व संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले भने नेकपाको नामसम्बन्धि मुद्दाको र अहिलेको मुद्दाको सम्बन्धबारे फेरि प्रश्न गरेका थिए । ‘यी दुई मुद्दामा सम्बन्ध के हो ? त्यो मुद्दा तात्विक रिलेसन राख्छ ? तात्विक रिलेसन राख्छ कि राख्दैन ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने आफू पनि पुनरावलोकन नदिने इजलासमा रहेकाले आफ्नो मोरल प्रश्न उठ्न सक्छ कि सक्दैन ? भनेर गरेको प्रश्नको जवाफमा कार्कीले भने, ‘कार्की त्यसमा आफैं विचार गर्नुस् ।’ त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बहसमा आएका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गर्नुपर्ने भएकाले इजलासमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।
गत फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर ठूलो दललाई संसद् चलाउ भनेको तर २३ गतेको फैसलाले ठूलो दललाई विभाजन गरिदिएको थापाको तर्क थियो । ‘पहिला ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ठूलो पार्टीले हाउस चलाउ भनेर फैसला दियो । अनि अर्को फैसलाले पार्टी विभाजन गरिदियो । त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्‍यो,’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीशले पुनरावलोकन नदिनेमा आफू पनि भएको प्रसंग दोहोर्‍याउँदै सोधे, ‘मेरो के हुन्छ ?’ जवाफमा बेलायत लगायत उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले त्यसको पनि विकल्प रहेको भन्दै सुझाए, ‘तपाईं लिभ (बिदा)मा बसे भइहाल्यो श्रीमान् !सञ्चारकेन्द्र बाट साभार